Banaanbaxa Jimcaha | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho waxaa aad loo hadal-hayaa Banaanbaxa Jimcaha ay ku baaqeen Musharixiinta Mucaaradka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaaladda Muqdisho hadal-heynta ugu badan ee ka jirta wuxuu noqday Banaanbaxa Jimcaha iyo dhibaatada ka dhalan karta hadii Farmaajo is-hortaag ku sameeyo.
Banaanbaxa Jimcaha waxaa hogaaminaya Musharixiinta Mucaaradka oo ay ku jiraan Madaxweyniyeyaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, waxaana la filayaa inuu ka dhaco taallada Daljirka Dahsoon, oo ku dhaw xarunta NISA.
Waxay u badan tahay in dowladda ay wadooyinka xiri doonto maalin kahor Jimcaha, islamarkaana sidii horey u dhacay uu Farmaajo Ciidanka Haramcad iyo kuwa Gor-Gor adeegsan doono, lana dul-dhigi doono guryaha ay degan yihiin Mushariixnta.
Musharixiinta waxay ku doodayaan in Banaanbaxa Jimcaha oo yahay mid nabdoon, islamarkaana ay ku cabirayaan dareenka shacabka ee diidmada inuu Farmaajo si sharci-darro ah kusii joogo Villa Somalia.
Billooyin kahor ayay Mucaaradka isku dayeen inay dhigaan dibadbax, laakiin laga hortagay kadib markii jidadka Ciidamo lagu jaray, iyadoo qeybo kamid ah magaaladda ay ka dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya askarta iyo dad doonayay inay banaanbax sameeyaan, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Rajiimka Farmaajo loogama baran inuu siiyo mucaaradka fursad ay ku sameeyaan dhaq-dhaqaaq isaga ka dhan ah, waxayna dowladdiisa caburisay xoriyadda hadalka iyo xuquuqda dastuuriga ah ee ku aadan in la qaban karo banaanbax nabdoon.
Mudo-xileedkii Farmaajo oo dhamaaday iyo isaga oo aan xukunka wareejin, sidoo kalena diiday inuu doorashadda qabto ayaa keentay jahwareer siyaasadeed iyo inay Mucaaradka qabtaan banaanbaxyo.